आइओएम डिनमाथि कार्यकक्षमै दुर्व्यवहारका अभियुक्त अझै प्रहरीको हात लागेनन्, फ्याकल्टी डाक्टरले थाले आन्दोलन – Health Post Nepal
२०७६ असोज १ गते १४:४२
चिकित्साशिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई झुक्याएर कार्यकक्षमै प्रवेश गरी अमानवीय दुर्व्यवहार गर्ने अभियुक्तलाई प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छै्रन । आइतबार पत्रकार हुँ भन्दै अन्तर्वार्ताका लागि दिउँसो २ बजेको समय लिएर डिनको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका एक युवाले केहीबेर कुरा गरेर डा. अग्रवालमाथि कालो मसी छर्किएर भागेका थिए ।
मर्यादित पदमा बसेका मर्यादित व्यक्तित्वमाथि कार्यकक्षमै प्रवेश गरी दिनदहाडै अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहार गर्ने अभियुक्तलाई घटनाको ४ दिन बितिसक्दा पनि प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि आइओएमका फ्याकल्टी डक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आइओएमका चिकित्सकहरूको संगठन फ्याकल्टी डाक्टर्स एसोसिएसनले घटनाको भोलिपल्ट सोमबार विज्ञप्तिमार्फत डा. अग्रवालमाथि भएको दुर्व्यवहारको निन्दा गर्दै दोषीलाई ४८ घण्टाभित्र कारबाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । निर्धारित समयसीमाभित्र दोषीलाई पक्रिएर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी एसोसिएसनले दिएको थियो । तर, सिसिटिभीमा कैद भएका अभियुक्तलाई घटनाको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि नियन्त्रणमा लिन प्रशासन असमर्थ भएपछि फ्याकल्टी डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
दोषीलाई कारबाही गर्न प्रशासनलाई दबाब दिन पहिलो चरणमा फ्याकल्टी डाक्टरहरू मंगलबार कालोपट्टी बाँधेर अस्पताल प्रांगणमा भेला भएका छन् । तर, प्रशासनले दोषीलाई यथाशीघ्र पक्राउ नगरेमा तथा कारबाहीका लागि ठोस कदम नचालेमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ । चिकित्सकको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्ने सवालमा आलटाल भएमा आन्दोलनका कठोर कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने एसोसिएसनको भनाइ छ ।
फ्याकल्टी डाक्टर्स एसोसिएसन